အိန္ဒိယက ဗုဒ္ဓဂယာ ကိုလာရင် ရွှေတွေအများကြီး ယူမလာပါနဲ့၊ ထောင်ကျ တဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
HomeWeirdအိန္ဒိယက ဗုဒ္ဓဂယာ ကိုလာရင် ရွှေတွေအများကြီး ယူမလာပါနဲ့၊ ထောင်ကျ တဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ဒီနေ့အဖြစ်လေးပေါ့နော်..လေယာဉ် ပေါ်မှာ..လူအယောက်20ဘဲပါလာတယ်…ကျွန်တော်တို့ခရီးသည်နဲ့ ကျွန်တော် အပါအဝင်ဆို 11 ယောက်ပေါ့… ကျန်တဲ့9ယောက်က… နောက်တစ်ဖွဲ့ပေါ့… သူတို့ကတော့ မိသားစုပုံစံလေး လာကြ တာပေါ့
ဂယာလေဆိပ်ကို…အိန္ဒိယစံတော်ချိန်…1:40 မှာကျွန်တော်တို့ရောက်တယ်ဗျ နောက်အဖွဲ့မှာပါတဲ့ ခန့်မှန်းအသက် 45 နှစ် လောက်ရှိမဲ့ အမျိုးသမီးက.. 100g.. လက်ကောက်လေးကွင်းနဲ့ 181g ကွင်းဆက်ဆွဲကြိုး..တစ်ကုံးပေါ့…. အာ့မှာပြသနာက စတာဘဲ….
ပစ္စည်းတွေအသိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့passportစာအုပ်ကိုပါထိန်းသိမ်းထားကြတယ်.. aw..ဒါနက်. .ပစ္စည်းသိမ်းခံရတဲ့ အမျိုးသမီးက ခုကြိမ်နဲ့ဆို ဂယာ ကိုရောက်တာသုံးခေါက်ရှိပြီတဲ့…လွန်ခဲ့တဲ့15ရက်လောက်က မြန်မာပြည်က အမျိုးသား တစ်ဦးကိုလဲ…အလားတူပုံစံနဲ့တွေ့လို့..ပစ္စည်းသိမ်းပြီးဂျေးထဲနှစ်လထည့်ထားတယ်လို့လဲကြားတယ်ဗျ….(အာ့အမျိုးသမီးကိုစစ်တာ…ကျွန်တော်အရှ့မှာဘဲဗျ…ဘယ်သူနဲ့လာတာလဲမေးတာ..တစ်ယောက်တည်းလာတာလို့ဘဲပြောတယ်…)သူမှာအဖွဲ့မရှိပါဘူးတဲ့….ဒါမဲ့လေဆိပ်အပြင်မှာသူကိုစောင့်နေတဲ့..ဘုန်းဘုန်းတစ်ပါးနဲ့.ကျွန်တော်နဲ့အတူလေယာဉ်အတူစီးလာတဲ့တစ်ယောက်ရှိတယ်ဗျ)
ကျွန်တော်ကတော့ ကြားကဘဲ.. ဝင်ပြီးတောင်းပန်ပေးလိုက်ပါတယ်… ဂျေးထဲမထည့်ဖို့…. အောင်မြင်တယ်လို့ဘဲ ပြောရမှာ ပေါ့..သူကို..ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်။ ပစ္စည်းနဲ့ passport စာအုပ်ကို ထိန်းသိမ်းထားတယ်) မနက်ဖန် 10:30 ပြန်ချိန်းထား တဲ့ဗျ….ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲတော့ ကျွန်တော်လည်းသိချင်နေတယ်… အောက်ကပုံလေးတွေကိုကျိသွားအုံး….
ဂယာ လေဆိပ်ကနေဘုန်းကြီးကျောင်းကို ရုံးကားနဲ့ပြန်လိုက်ပို့ခဲ့တယ်..
6:00လောက်ပေါ့..သူတို့ရဲ့လူကြီးကိုစောင့်နေတာ..စိတ်ကသိပ်မရှည်တော့လို့..ဆေးလိပ်သောက်ချင်တယ်လို့ပြောတော့..လေဆိပ်မှာက cctvတွေနဲ့တဲ့ အိမ်သာထဲသွားသောက်ဆိုပြီးသူပါလိုက်လာပေးတယ်…
Credit –Wunna Htun
အိန်ဒိယ က ဗုဒ်ဓဂယာ ကိုလာရငျ ရှတှေအေမြားကွီး ယူမလာပါနဲ့၊ ထောငျကြ တဲ့အထိ ဖွဈနိုငျပါတယျ
ဒီနအေ့ဖွဈလေးပေါ့နျော..လယောဉျ ပျေါမှာ..လူအယောကျ20ဘဲပါလာတယျ…ကြှနျတျောတို့ခရီးသညျနဲ့ ကြှနျတျော အပါအဝငျဆို 11 ယောကျပေါ့… ကနျြတဲ့9ယောကျက… နောကျတဈဖှဲ့ပေါ့… သူတို့ကတော့ မိသားစုပုံစံလေး လာကွ တာပေါ့
ဂယာလဆေိပျကို…အိန်ဒိယစံတျောခြိနျ…1:40 မှာကြှနျတျောတို့ရောကျတယျဗြ နောကျအဖှဲ့မှာပါတဲ့ ခနျ့မှနျးအသကျ 45 နှဈ လောကျရှိမဲ့ အမြိုးသမီးက.. 100g.. လကျကောကျလေးကှငျးနဲ့ 181g ကှငျးဆကျဆှဲကွိုး..တဈကုံးပေါ့…. အာ့မှာပွသနာက စတာဘဲ….
ပစ်စညျးတှအေသိမျးခံရတဲ့အမြိုးသမီးရဲ့passportစာအုပျကိုပါထိနျးသိမျးထားကွတယျ.. aw..ဒါနကျ. .ပစ်စညျးသိမျးခံရတဲ့ အမြိုးသမီးက ခုကွိမျနဲ့ဆို ဂယာ ကိုရောကျတာသုံးခေါကျရှိပွီတဲ့…လှနျခဲ့တဲ့15ရကျလောကျက မွနျမာပွညျက အမြိုးသား တဈဦးကိုလဲ…အလားတူပုံစံနဲ့တှလေို့..ပစ်စညျးသိမျးပွီးဂြေးထဲနှဈလထညျ့ထားတယျလို့လဲကွားတယျဗြ….(အာ့အမြိုးသမီးကိုစဈတာ…ကြှနျတျောအရှ့မှာဘဲဗြ…ဘယျသူနဲ့လာတာလဲမေးတာ..တဈယောကျတညျးလာတာလို့ဘဲပွောတယျ…)သူမှာအဖှဲ့မရှိပါဘူးတဲ့….ဒါမဲ့လဆေိပျအပွငျမှာသူကိုစောငျ့နတေဲ့..ဘုနျးဘုနျးတဈပါးနဲ့.ကြှနျတျောနဲ့အတူလယောဉျအတူစီးလာတဲ့တဈယောကျရှိတယျဗြ)
ကြှနျတျောကတော့ ကွားကဘဲ.. ဝငျပွီးတောငျးပနျပေးလိုကျပါတယျ… ဂြေးထဲမထညျ့ဖို့…. အောငျမွငျတယျလို့ဘဲ ပွောရမှာ ပေါ့..သူကို..ပွနျလှတျပေးလိုကျတယျ။ ပစ်စညျးနဲ့ passport စာအုပျကို ထိနျးသိမျးထားတယျ) မနကျဖနျ 10:30 ပွနျခြိနျးထား တဲ့ဗြ….ဘာတှဆေကျဖွဈမလဲတော့ ကြှနျတျောလညျးသိခငျြနတေယျ… အောကျကပုံလေးတှကေိုကြိသှားအုံး….
ဂယာ လဆေိပျကနဘေုနျးကွီးကြောငျးကို ရုံးကားနဲ့ပွနျလိုကျပို့ခဲ့တယျ..
6:00လောကျပေါ့..သူတို့ရဲ့လူကွီးကိုစောငျ့နတော..စိတျကသိပျမရှညျတော့လို့..ဆေးလိပျသောကျခငျြတယျလို့ပွောတော့..လဆေိပျမှာက cctvတှနေဲ့တဲ့ အိမျသာထဲသှားသောကျဆိုပွီးသူပါလိုကျလာပေးတယျ…
Facts Religion Travel Weird